Snapchat inotangisa kutsvagwa kwese kutsvagirwa kuti tirege kuenda kumakwikwi | IPhone nhau
Nyika yesocial media yakachinja zvakanyanya mumakore apfuura, Ndingashinga kutaura kuti mugore rekupedzisira, uye ichi hachisi chinhu chinotora nguva yakareba, chimwe chinhu chitsva. Vazhinji venyu muchayeuka mashandiro anoita Snapchat kusvika pakuti vamwe vakaratidza zano rake uye vakasarudza kubatanidza zvakaitwa naSnapchat mumaapps avo. Saka akazvarwa Instagram Stories semuenzaniso, mukwikwidzi akajeka weSnapchat.
Snapchat anoda kuenderera mberi mujaho wezvavakatanga ivo pachavo, vachigovana tunyaya tudiki. Saka, Snapchat ichangobva kuzivisa kuti iri kuunza yakavandudzwa yekutsvaga ficha kune ayo iOS uye Android maapp.. Zvinotaridza kuti havadi kurega pa Instagram Nyaya ... Mushure mekusvetuka tinokupa zvese izvo.
Iri raive basa rinopfuura rinodikanwa kubva painjini yekutsvaga iyo Snapchat yakasiya zvakawanda kuti zvidikanwe. Iyi injini yekutsvaga nyowani yakagadzirirwa nekumhanyisa mupfungwa, mune kumhanya kwatinoita nekutsvaga. Iye zvino tichaona nyowani yekutsvaga pamusoro peiyo kamera interface (mukati meSpapchat). Kubva ipapo tichava nemukana wekutanga chat needu mazhinji atinosangana navo nemapoka, Ver itsva ystävät, wedzera shamwari itsva, uye tsvaga zvirimo zvatinoda. Kutsvaga kweshamwari itsva, uye zviripo, zvinogona kuitwa nemazita uye zita rekushandisa.
Uye zvakare, imwe yenyaya dzayo dzichangoburwa, Yedu Nyaya, inova yepasirese. The makambani vanogonawo shandisa chinhu chitsva ichi uye sarudza vashandisi vanogovana nguva navo yenhoroondo yayo, uye ndiani anogona kuibatsira. Nhau kuti iwe unogona kuona pane yako Snapchat mumazuva anotevera, Ichangobva kupihwa asi hazvishamise kuti hazvikutorere iwe kuti uishandise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Snapchat inotangisa kutsvaga kunodiwa kwese kwese kuti tirege kuenda kumakwikwi
Iyo yepakutanga iPhone yaive isingadzoreke